Imigca yeveki, iifonti zekhompyuter | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Kule fakelo entsha yeefonti zeveki esikulethela yona iifonti ezintathu ezinesimbo sekhompyuter okanye setekhnoloji. Ngamanye amaxesha kufuneka sigqibe umsebenzi ngohlobo lwefonti olusikhumbuza ikhompyuter, kwaye nangona iikhompyuter ngoku zisebenzisa iifonti zazo zonke iintlobo, iifonti zesikwere oomatshini ababesebenzisa kwii-80s nangaphambili ziluncedo kakhulu ekufezekiseni loo nto uyifunayo. Kutshanje ndisebenzise ezinye zeefonti kwenye yemisebenzi yam apho bendifuna ukuba uxwebhu lubonakale ludala, lwenziwe yikhompyuter, oluhamba kunye nokubhalwa kweleta enesihloko kakhulu kwisitayile sabashicileli beenaliti zexesha onokuthi ufezekise iziphumo eziyimpumelelo.
Siza kuvavanya iifonti ezintathu zendlela yekhompyuter esiyicebisayo kule veki:
Iibhayithi ezingama-256. Olu hlobo lochwethezo lubonakaliswa ngemilo yoxande kunye neenkcukacha ezithile zokuba imivumbo yayo ihlala ijiyile. Ke sifumana umphumo wokuqala kunye nokubetha okwenza unobumba ngamnye ahluke. Inkangeleko enikezelwa yitypography yi-retro kakhulu nokuba yisitayile sekhompyuter, ngenxa yeso sizathu besifuna ukuyifaka kolu luhlu, ke uya kuba neendidi ezininzi. Kufuneka iqatshelwe ukuba oonobumba abancinci nabonobumba abakhulu bayafana kwaye batshintsha kuphela ubungakanani, kugcinwa uyilo lwabo kuzo zombini.
Khuphela umthombo apha I-256 Byte
Isekethe idikiwe. Olu hlobo lochwethezi luyinto yoqobo kwaye liguqula oonobumba babe ziisekethi, akukho lula ukuba ifundwe ke siyacebisa kuphela izihloko kunye nemibhalo emifutshane. isangqa ngelixa eyokuqala inezinto ezimbini zolu hlobo.
Khuphela umthombo apha Isekethe idikiwe
Kancinci. Oku kunokwenzeka Uhlobo lochwethezo esiluthanda kakhulu, kuba alukho sikwere kodwa lubonelela ngezinto ze-trapezoidal kuninzi lweeleta kunye nemivumbo ebanzi kunezinye, kodwa ngendlela ecekeceke. Qaphela ukuba uyilo lwecala eliphezulu nelisezantsi lahlukile, ke sinokulisebenzisa kwizicatshulwa ezide ngaphandle kwengxaki.
Khuphela umthombo apha bitwise
Imigca evela kwiiveki ezidlulileyo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Imigca yeveki, iifonti zekhompyuter
Iibhukumaka ezingama-20 zokuyila kakhulu